बोकाले लिटरका लिटर दुध दिन थालेपछि… – ABC NEWS 24
बोकाले लिटरका लिटर दुध दिन थालेपछि…
काठमाडौं । यो संसार कति विचित्रको छ भन्ने कुरा हामी अनुमान पनि गर्न सक्दैनौं । हाम्रा वरपर यस्ता कुराहरु देखा पर्छन, जुन हामीलाई थाहा हुँदैन । हामीले कहिल्लै नदेखेका वा नसुनेका कुरा अचानक वास्तविक रुपमा देख्न वा भोग्न पाउँदा जो कोही अच्चममा पर्नु कुनै नौलो कुरा होईन । आज हामी त्यस्तै एक बोकाका बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ ।
कुरा केही अनौंठो छ, तर यो सत्य हो । खबर यो हो कि एउटा बोकाले दूध दिईरहेको छ । यो अनौठो कुरा भारत, राजस्थान राज्यको जयपुरको गुर्जा गाउँसँग सम्बन्धित छ । दाबी अनुसार त्यहाँ एउटा यस्तो बोका छ जसले बिहान र बेलुका एक लिटर दूध दिँदै आएको छ । अब यो बोका सबैको लागि अचम्मको कुरा भएको छ । दिनहुँ हेर्न आउँनेहरुको ठुलो भिड लागेको हुन्छ ।
न्युज १८ को समाचारलाई आधार मान्ने हो भने डाक्टरहरूले यसलाई हर्मोन गडबडीको रुपमा स्वीकार गरेका छन् । त्यहाँका सर्वसाधारणले यसलाई भगवानको चमत्कारिक लिला पनि भनेका छन् । यदि तपाईं यस बोकाको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने, यसको मालिक राजवीर कुशवाहाले एक वर्ष पहिले यो पशु मेलाबाट झण्डै ५ हजार नेपाली रूपैयाँमा किनेर ल्याएका हुन् । त्यतिखेर बोका दुई महिनाको थियो ।
समाचारका अनुसार, करीव ६ महिना अघि बोकामा यस्तो चमत्कारिक हर्मोन विकास भयो र दुध दिन सुरु गर्यो । यस बोकालाई हेर्न मानिसहरूको ठुलो भेला भइरहेको हुन्छ । मान्छेहरु यसमाथि विश्वास गर्न असमर्थ छन् । पशु चिकित्सक ज्ञान प्रकाशले सक्सेनाले यस्तो घटना धेरै विरलै हुने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘यो एक लाखमा एक मात्र छ । यसको पछाडि हर्मोनको गडबडी छ ।’ यसको चमत्कारिक गुणका कारण उनका मालिक यसलाई बेच्न चाहँदैनन् । उनका अनुसार, बोकाले तिनीहरूको आँगनमा रौनकता छाइरहेको छ । Source : indiatimes
← कोरोनालाइ लिएर एकाबिहान WHO बाट आयो यस्तो खबर ! छायो विश्वभर खुसियाली !
मनपरेको कानको मुन्द्रा नपाएपछी ह’त्या गरेका ह’त्यारा भागेका गिरी प’क्राउ →